१५. प्रशंसा - Harish Bk
Home/ Article/१५. प्रशंसा
Harish BK November 7, 2017
अमेरिकी मानवतावादी मनोवेत्ता अब्राहम मास्लोको अनुभव एवम् अनुसन्धानले के पत्ता लाएका छन् भने मान्छेले आहारदेखि आत्मबोधसम्म खोज्छन् । आहार उसको सबैभन्दा पहिलो खोज हुन्छ भने आत्मबोध उसको सबैभन्दा पछिल्लो खोज । आहार प्राप्त भएपछि मात्र उसमा सुरक्षाबोध पलाउँछ अर्थात् खान–लाउन पाएपछि आफूलाई सुरक्षित राख्नमा उसको ध्यान केन्द्रित रहन्छ । त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति भइसेकपछि उसको खोज हुन्छ प्रेम प्यारको र एक दिन यो पनि प्राप्त अनि त्यसपछि उसले खोज्छ आत्मसम्मान, ज्ञानगुणका कुरा र कलात्मक सुन्दर कुराहरू । यी सबै पाइसक्दा पनि ऊ अझै मानसिक रूपमा पूर्णतया स्वस्थ एवम् सन्तुलित हुँदैन । त्यसैले उसको अन्तिम खोज हुन्छ आत्मबोधको । जहाँबाट खण्डित मान्छे अखण्ड मानव बन्छ र यही जीवनको सार्थकता एवम् पूर्णता हो ।
उपर्युक्त प्रसंगलाई मध्यनजर राख्दै अनुसन्धानबाट सिद्ध तर स्तब्ध पार्नेखालको एउटा तथ्य प्रस्तुत छ ः
महिलाहरुले पुरुषसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नका थुप्रै कारण होलान् । त्यसमा घरेलु हिंसा प्रमुख देखिन्छ । अर्थात् महिलामाथि गरिने दुव्र्यवहार, शोषण एवम् क्रूर वारदातहरू सम्बन्धविच्छेदका कारण देखिन्छ । तर, वास्तविक कारण भने यी हुँदै होइनन् । वास्तविक कारण अनुसन्धानबाट सिद्ध भएअनुसार उनीहरूको कुनै पनि काम कुरालाई प्रशंसा नगर्नु नै देखियो । अतः जुन परिवारमा मारपिटको साथै उचित कामका लागि उचित प्रशंसा गरिने परिपाटी छ त्यहाँ सम्बन्धविच्छेद भएको पाइएन । भन्न परोइन यसो हुनाका कारण प्रशंसाबाट चुलिने आत्मसम्मान हो ।
प्रसंग बदलौं । तपाईं कस्ता मान्छेलाई सबैभन्दा समझदार ठान्नुहुन्छ ? धेरै उमेर भएका पाका मान्छेलाई ? वा धेरै पढेलेखेका शिक्षितलाई ? वा ख्यातिप्राप्त विज्ञ विद्वान्लाई ? अनुसन्धानबाट के सिद्ध भयो भने हामी उपर्युक्त मान्छेलाई समझदार ठान्दैनौँ । त्यो हाम्रो मापदण्ड होइन । हामी त्यसै मान्छेलाई समझदार ठान्छौँ जसले बेलाबखत हाम्रो प्रशंसा गर्छ । प्रशंसा मनको ठूलो खुराक हो र सुखी एवम् सफल जीवन बाँच्न प्रशंसा गर्न मिल्ने ठाउँमा सबैले सबैको प्रशंसा गर्नुमा नै सबैको कल्याण निहित छ । अर्थात् प्रशंसा गर्न जान्नेहरू सफल र सुखी रहन्छन् भने यसको उल्टो निन्दा गर्नेहरू अस्वस्थ एवम् अशक्त हुन्छन ।